Chip စျေး - အွန်လိုင်း CHIP ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Chip (CHIP)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Chip (CHIP) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Chip ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Chip တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Chip များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ChipCHIP သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00108ChipCHIP သို့ ယူရိုEUR€0.000919ChipCHIP သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000827ChipCHIP သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000989ChipCHIP သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00972ChipCHIP သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00685ChipCHIP သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0241ChipCHIP သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00405ChipCHIP သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00144ChipCHIP သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00151ChipCHIP သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0242ChipCHIP သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00836ChipCHIP သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0058ChipCHIP သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0807ChipCHIP သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.183ChipCHIP သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00148ChipCHIP သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00165ChipCHIP သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0335ChipCHIP သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00749ChipCHIP သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.115ChipCHIP သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.28ChipCHIP သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.419ChipCHIP သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0789ChipCHIP သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0299
ChipCHIP သို့ BitcoinBTC0.0000001 ChipCHIP သို့ EthereumETH0.000003 ChipCHIP သို့ LitecoinLTC0.00002 ChipCHIP သို့ DigitalCashDASH0.00001 ChipCHIP သို့ MoneroXMR0.00001 ChipCHIP သို့ NxtNXT0.0881 ChipCHIP သို့ Ethereum ClassicETC0.000162 ChipCHIP သို့ DogecoinDOGE0.317 ChipCHIP သို့ ZCashZEC0.00001 ChipCHIP သို့ BitsharesBTS0.0425 ChipCHIP သို့ DigiByteDGB0.0359 ChipCHIP သို့ RippleXRP0.00388 ChipCHIP သို့ BitcoinDarkBTCD0.00004 ChipCHIP သို့ PeerCoinPPC0.00366 ChipCHIP သို့ CraigsCoinCRAIG0.501 ChipCHIP သို့ BitstakeXBS0.0469 ChipCHIP သို့ PayCoinXPY0.0192 ChipCHIP သို့ ProsperCoinPRC0.138 ChipCHIP သို့ YbCoinYBC0.0000006 ChipCHIP သို့ DarkKushDANK0.352 ChipCHIP သို့ GiveCoinGIVE2.38 ChipCHIP သို့ KoboCoinKOBO0.25 ChipCHIP သို့ DarkTokenDT0.000993 ChipCHIP သို့ CETUS CoinCETI3.17
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 07:00:03 +0000.